Gabdho lagu eedeeyay dilka nin ay walaalo ahaayeen Madaxweyne oo la maxkamadeynayo - Hablaha Media Network
Gabdho lagu eedeeyay dilka nin ay walaalo ahaayeen Madaxweyne oo la maxkamadeynayo
HMN:- Maxkamad ku taal magaalada Kuala Lampur ee dalka Malaysia ayaa lagu wadaa in berri la soo taago maxkamad labo gabdhood oo lagu eedeynayo in ay ka dambeeyeen dilka nin ay walaalo ahaayeen Madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya.
Labadan gabdhood oo ka soo kala jeeda wadamada Indonisia iyo Vietnam ayaa lagu oogayaa dacwad ah dilka waxaana ay mudan karaan dil.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Malaysia Janaraal Maxamed Apandi Cal ayaa sheegay in gabdhahan lagu kala magacaabo Doan Thi Huong iyo Siti Aisyah ay wejihi karaan xukun dil ah hadii ay ku cadaato in ay si bareer ah u dileen Kim Jong-un.
Dilka ninka la dhashay Madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-Nam ayaa labadan haween waxa ay u adeegsadeen sun halis ah VX oo ay wajiga ka mariyeen xili uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha magaalada Kuala Lampur.
Wararka ayaa sheegaya in dilka Kim oo mucaarad ku ahaa hogaamiyaha dalka Waqoyiga Kuuriya uu ahaa mid qorsheysan ayna a qeybqaateen sirdoonka dalka Waqoyiga Kuuriya.
Waxaa socda hadda baadigoob lagu doonayo shan ruux oo la sheegay in ay ka soo jeedaan dalka Waqoyiga Kuuriya kuwaasoo ku lug lahaa dilka Kim.